Juventus Oo Sannadkii 7aad Oo Xidhiidh Ah Ku Guuleysatay Horyaalka Talyaaniga – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeAfricaWararka Somaliga AhJuventus Oo Sannadkii 7aad Oo Xidhiidh Ah Ku Guuleysatay Horyaalka Talyaaniga
Juventus Oo Sannadkii 7aad Oo Xidhiidh Ah Ku Guuleysatay Horyaalka Talyaaniga
Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa sannadkii toddobaad oo xidhiidh ah ku guuleysatay horyaalka waddanka Talyaaniga, kaddib markii ay barbar dhac goolal la’aan ah la gashay Roma oo ay ku booqatay garoonka Olimpico.
Juventus ayaa u baahnayd hal dhibic oo kaliya si ay koobka ugu guuleysato, maadaama ay afar dhibcood oo nadiif ah ka horreynaysay Napoli oo kaalinta labaad ku jirta, iyadoo horyaalkana hal ciyaar ahi ka dhiman tahay.
Juventus oo toddobaadkii hore ku guuleysatay koobka Coppa Italia oo ay ku burburisay AC Milan, ayaa waxay muujisay karti iyo in ay tahay kooxda kaliya ee sannadkan ka talin doonta mimbarka laysku guddoonsiiyo koobabka.
Tababare Massimiliano Allegri oo koobkiisii afraad oo xidhiidh ah kula guuleysanaya Juventus maadaama uu saddexdii hore tababare kale haystay, ayaa waxa uu kursiga kaydka geliyey Buffon iyo ciyaaryahanno kale, hase yeeshee, waxa uu soo qaddimay Dybala iyo Higuain oo laf dhuungashay ku noqday difaaca Roma oo qaybtii dambe uu dhexdeeda casaan kaga baxay Nainggolan.
Markii uu garsooruhu afuufay siidhiga dhamaadka ciyaarta ayaa waxa damaashaad uu ka bilaabmay garoonka Olimpico ee ay ciyaartu ka socotay iyo magaalada Turin ee ay Juventus ka dhisan tahay.
Inkasta oo Juventus ay sannadkii 7aad oo xidhiidh ah ku guuleysteen horyaalka, haddana waxa la filayaa in xili ciyaareedka dambe ay Juventus la iman doonto wejiyo badan oo ku cusub halka kuwo kale oo badanna ay ka bixi doonaa. Ciyaaryahannada baxaya waxa ka mid ah goolhaye Buffon oo muddo 17 sannadood ah soo dhex-taagnaa goolka.